सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, १६ असोज २०७६)
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले १२ प्रतिशत बोनस शेयर र ७० प्रतिशत हकप्रदमार्फत चुक्तापूँजी बढाएको छ । साउन २८ गते १२ प्रतिशत बोनस शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत गराएको कम्पनीको बोनसपश्चात् चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब २६ करोड ७७ लाख २८ हजार पुगेको छ । सोही पूँजीको आधारमा कम्पनीले ७० प्रतिशत हकप्रद विक्री गरेको हो ।
कम्पनीले भदौ ८ गतेदेखि असोज १२ गतेसम्म हकप्रद विक्री गरेको हो । हकप्रदपश्चात् भने चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब १५ करोड ५१ लाख ३७ हजार पुग्नेछ । गत आवमा कम्पनीले रू. २० करोड ८६ लाख १३ हजार खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यो नाफा रू. १२ करोड १२ लाख ६५ हजार थियो । गत असारसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीमा ३ लाख ७६ हजार ९६७ बीमालेख कायम छ । बुधवारको कारोबारमा कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य १४ अंक घटेर रू. २६३ कायम भएको छ ।
2019-10-03 - 239 view(s) - abhiyandaily